VLC media player. Zvimwe zvinotonhorera maficha. | Linux Vakapindwa muropa
VLC media player. Zvimwe zvinotonhorera maficha
VLC media player inobvumidza iwe kutsvaga uye kutamba zvemukati online.
VLC media player ndeimwe eaya mapurogiramu andaizoisa kunyangwe anga asiri akasununguka uye akavhura sosi. Saizvozvo, kuidana kuti mutambi chinhu chisiri pasi. Pamusoro pekutamba mafomati mazhinji emultimedia (zvese zvirimo zvakachengetedzwa munharaunda uye zvinowanikwa online) ine kutenderera uye fomati kutendeuka kugona.
Muchikamu chino tinoongorora zvimwe zvinhu zvisingaitwe nemunhu wese.
1 Zvinhu izvo VLC media player inogona kuita
1.1 Ratidza uye chengetedza vhidhiyo yeYouTube
1.2 Chinja pakati pemafomati
1.3 Mafirita ekuteerera
1.4 Teerera kumaredhiyo epamhepo uye podcast
1.5 Kuwedzera mamwe marongero
Zvinhu izvo VLC media player inogona kuita
Ratidza uye chengetedza vhidhiyo yeYouTube
Ini ndinotaura Youtube nekuti ibasa randakaongorora, asi rinofanira kushanda nemumwe online multimedia zvemukati zvinobvumidza kugovana zvinongedzo.
Kuti uite izvi tevera zvinotevera nzira
1) Enda kuMedia → Vhura Network Nzvimbo.
2) Namatira chinongedzo.
3) Kana iwe uchingoda chete kuona iyo vhidhiyo, tinya pa Play.
4) Kana iwe uchida kurodha pasi vhidhiyo, ziva kuti bhatani iri chaizvo donhwe-pasi menyu. Pano iwe unofanirwa kusarudza Chinja.
5) Kana iwe uchida kuona iyo vhidhiyo panguva imwe chete sezvainoshandurwa Dzvanya paRatidza izvo zvinobuda. Sarudza vhidhiyo kana odhiyo faira (yekutanga mune iyo rondedzero inowanzo shanda uye sarudza nzvimbo. Taura iyo faira yekuenda.
6) Dzvanya paKutanga.
Chinja pakati pemafomati
Maitiro atinoshandisa kurodha pasi vhidhiyo yepamhepo anoshanda kushandura iyo yemukati fomati yakachengetwa padiski redu kana mune imwe yemuviri mudziyo. Nzira yekuzviita inotevera
1) Enda kuMiddle Medium → Chinja.
2) Dzvanya Wedzera kuti usarudze mafaera.
3) Dhinda bhatani rekushandura.
4) Pano tine mukana wekuwedzera musoro wenyaya. Mune ino kesi isu tinofanirwa kutarisa inoenderana bhokisi uye riwedzere kubva kwaro kwaro.
5) Isu tinosarudza iyo mbiri. Kana isu tichida kuti iwo musoro wenyaya uiswe mukati mevhidhiyo, tinofanirwa kubaya pane chishandiso. Dzvanya pane Subtitle tebhu, tinya pahwindo uye pane Superimpose zita pane vhidhiyo. Dzvanya paSave.
6) Sarudza nzvimbo yekuchengetedza vhidhiyo. Nyora zita uye tinya Sevha.
7) Dzvanya paKutanga.
Kunyangwe vazhinji vedu vakasarudza pamhepo masevhisi masevhisi, kune vamwewo vanhu vakati wandei vanosarudza kunakirwa zvemukati zvakachengetwa padhisiki ravo. Muchiitiko ichocho VLC inopa maturusi akasiyana. Imwe yacho ndeye graphic equalizer.
Isu tinokwanisa kuwana iyo yakaenzana mune iyo Zvishandiso → Mhedzisiro menyu. Mune imwechete tebhu inonzi Audio Mhedzisiro isu zvakare tine mamwe mafirita zvakare nemasiraidhi; compressor, spatializer, stereo expander uye, pasi pemusoro weAdvanced, toni yekudzora.
Kana iwe usiri kuda kuenda matsi, VLC ine vhoriyamu yakasarudzika basa kuona kuti iyo inoridzwa odhiyo inogara mukati meimwe parameter.
Unogona kuita izvi nenzira inotevera:
1) Enda kune Zvishandiso → Zvaunoda.
2) Dzvanya pane odhiyo tebhu.
3) Dzvanya paNowalize odhiyo hwindo.
4) Sarudza kukosha uye tinya paSave.
5) Vhara uye uvhure zvakare chirongwa.
Teerera kumaredhiyo epamhepo uye podcast
Kana iwe uchiziva chinongedzo cheredhiyo repamhepo, unogona kushandisa iyo network dump basa ratakaona pakutanga kwenyaya. Asi VLC zvakare inokutendera iwe kutsvaga zvemukati paShoucast kana Jamendo.
Nzira yekuzviita inotevera.
1) Enda kumenyu Tarisa → Rondedzero.
2) Pasi pechikamu cheInternet, une mukana wekutarisa zvirimo zviripo pane ese maviri masevhisi. Sarudza imwe wobva wadzvanya pane zvemukati zvinokufarira kuti utange kutamba.
Kuwedzera mamwe marongero
Kazhinji mutambi weVLC ane zvinotevera zvinodzora:
Enda kune vezvenhau pamberi pekutamba.
Enda pane zvinotevera zvirimo.
Chinja kuzere skrini.
Ratidza firita uye maitiro ekudzora.
Ridza midhiya mune irwo runyorwa.
Kusarudza mumenu Yekutarisa → Zvidimbu zvekutonga isu tine zvinodzora zve:
Ichi hachizove chinyorwa chekupedzisira chakatsaurirwa kuVLC kubvira isu tanga tine zvakawanda maficha zvasara mupombi (Ndinofanira kutaura keyboard?) Kana usati wambozama iwe unogona kuzviita nekuiisa kubva kumaneja wepakeji wekuparadzira kwako Linux kana kurodha pasi kubva papeji re projekiti iyo vhezheni yeWindows kana Mac.Inowanikwawo kune zvinofambisa muzvitoro zveApp.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » VLC media player. Zvimwe zvinotonhorera maficha
@VLC media player ndeimwe yeaya mapurogiramu andaizoisa kunyangwe anga asiri akasununguka uye akavhura sosi.
Mune mamwe mazwi, ivo vari kukubhadhara iwe kuti utaure kuti hazvina basa kana kodhi yekodhi iripo kuti iongororwe kana isiri iyo ... .Zvatova pachena kuti haufunge, nzeve dzako dzinoonekwa uye ndinozvitaura ndisina offending.
Kwete, vanondibhadhara kuti ndinyore nezve Linux uye mahara software. Maonero angu ekuti iwe unofanirwa kushandisa izvo zvakakunakira iwe ndinozvipa mahara
Anodiwa, wongororo yako yakanaka kwazvo, zvisinei kana ini ndichiedza kuona vhidhiyo yeYouTube, chete odhiyo inoridzwa uye kwete iyo mufananidzo, ichave YouTube iri kuzvidzivirira? Kwazisai compadre uye zvakare ndinotenda nekutarisa kwako.
Namatira ini vhidhiyo yekubatanidza
Pane imwe nguva ini pandakaisa Linux pakombuta yeshamwari yangu yakashaikwa mumwe mutambi, muridzi, iyo yaive nebasa rekuda kuziva: yakangozvirodha pasi kubva painternet uye yoisa zvinyorwa zvidiki zvemabhaisikopo zvakadhirowezwa nerukova. Ini ndinonzwisisa kuti izvi zvinogona kuitwa neVLC uye ndinofunga ndawana nzira ... asi ini ndanga ndatokanganwa. Kana iwe uchiziva icho uye hachina kuomarara uye iwe uchigona kuwedzera icho kuchinyorwa, ini ndichafara kuchigovana icho nemunhu iyeye. Kwaziwai !!
Ehe. Iko kune plugin inotora zvinyorwa zvidiki, ndinotsvaga uye ndozviisa mune inotevera chinyorwa.
Iyo nyowani vhezheni yePcLinuxOS 2019.11 yaburitswa
ACBackdoor, malware matsva anokanganisa Linux neWindows